မနျစီးတီးအသငျးနညျးပွ ဂှါဒီယိုလာကတော့ ဆောငျးရာသီပှဲဆကျကာလမှာ ၄၆ နာရီအတှငျး ပှဲစဉျ ၂ ပှဲကစားရမှာကွောငျ့ ကစားသမားတှကေို အအေးခနျးထဲမှာသိုလှောငျထားမယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဂှါဒီယိုလာက ဒီဇငျဘာ ၂၇ မှာဝုဗျအသငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားပွီးနောကျ ကစားသမားတှေ လနျးဆနျးမှုအပွညျ့ပွနျရဖို့ တဈခုတညျးသောလုပျဆောငျရမှာက သူတို့ကို ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ထားရမှာလို့ ပွောပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ အဲဒီပှဲအပွီး နောကျ၂ ရကျအကွာ ဒသေစံတျောခြိနျ ညနေ ၆း၀၀ မှာရှကျဖီးလျအသငျးနဲ့ ထပျမံရငျဆိုငျ ကစားရမှာကွောငျ့ပါ။ ဒီအခွအေနကေ ဂှါဒီယိုလာဟာအသငျးရဲ့လူစာရငျးအားလုံးကို အသုံးပွုရမယျဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ပှဲစဉျတှအေရ ကစားသမားတှေ အနားယူနိုငျဖို့ ဘယျလိုပွငျဆငျမလဲလို့ မေးရာမှာတော့ ဂှါဒီယိုလာက “သူတို့ကို ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ထားလိုကျမှာပါ၊ ကြှနျတျော ဟာသပွောတာမဟုတျပါဘူး”လို့ ပွောပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ဂှါဒီယိုလာက ဒဒအိမျကိုပွနျလိုကျမယျ၊ ရခေဲသတ်ေတာကိုဖှငျ့ပွီး သူတို့ကို အဲဒီထဲမှာ ၄၈ နာရီထားလိုကျမယျ၊ ပွီးရငျတော့ အီတီဟတျကှငျးထဲမှာ သူတို့ကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ကွကျဥခေါကျကွျောလုပျဖို့ ကြှနျတျော ရခေဲသတ်ေတာ ဖှငျ့လိုကျခြိနျမှာတော့ သူတို့နဲ့ စကားပွောဖွဈမှာပါ၊ ဒီအခွအေနမှော တခွားနညျးလမျးမရှိပါဘူး၊ တဈစုံတဈခုက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပထမရာသီတုနျးကလိုပဲ တူညီစှာထပျမံ ဖွဈပျေါလာတာပါ”လို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
နညျးပွဂှါဒီယိုလာရဲ့ စီးတီးအသငျးဟာ အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးက လီဗာပူးအသငျးနဲ့ ၈ မှတျအထိကှာဟနပေမေယျ့ စပိနျသားကတော့ ဒါက ပွဿနာတဈခုမဟုတျပါဘူးလို့ပွောပါတယျ။
ဂှါဒီယိုလာက ”ကြှနျတျော ကစားသမားတှအေတှကျပဲအာရုံစိုကျထားပါတယျ၊ ဒါကအရေးကွီးပါတယျ၊ လူတှကေကစားသမားတှကေို ဂရုမစိုကျကွပါဘူး၊ ပွောခငျြတာကကစားသမားတဈဦးကိုသူဒဏျရာရနလေားလို့ မေးရပါမယျ၊ အိုကေ နောကျတဈယောကျရော? ကြှနျတျောတို့ ပွီးခဲ့တာတှကေိုလညျးဖွရှေငျးရမှာ ဖွဈသလိုအနာဂတျမှာလညျးဖွရှေငျးရဦးမှာပါ “လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
လန်းဆန်းနေစေဖို့အတွက် မန်စီးတီးကြယ်ပွင့်တွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားမယ်ဆိုတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ
မန်စီးတီးအသင်းနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာကတော့ ဆောင်းရာသီပွဲဆက်ကာလမှာ ၄၆ နာရီအတွင်း ပွဲစဉ် ၂ ပွဲကစားရမှာကြောင့် ကစားသမားတွေကို အအေးခန်းထဲမှာသိုလှောင်ထားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဂွါဒီယိုလာက ဒီဇင်ဘာ ၂၇ မှာဝုဗ်အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားပြီးနောက် ကစားသမားတွေ လန်းဆန်းမှုအပြည့်ပြန်ရဖို့ တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ရမှာက သူတို့ကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားရမှာလို့ ပြောပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုရင် အဲဒီပွဲအပြီး နောက်၂ ရက်အကြာ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၆း၀၀ မှာရှက်ဖီးလ်အသင်းနဲ့ ထပ်မံရင်ဆိုင် ကစားရမှာကြောင့်ပါ။ ဒီအခြေအနေက ဂွါဒီယိုလာဟာအသင်းရဲ့လူစာရင်းအားလုံးကို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ပွဲစဉ်တွေအရ ကစားသမားတွေ အနားယူနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲလို့ မေးရာမှာတော့ ဂွါဒီယိုလာက “သူတို့ကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်မှာပါ၊ ကျွန်တော် ဟာသပြောတာမဟုတ်ပါဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဂွါဒီယိုလာက ဒဒအိမ်ကိုပြန်လိုက်မယ်၊ ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်ပြီး သူတို့ကို အဲဒီထဲမှာ ၄၈ နာရီထားလိုက်မယ်၊ ပြီးရင်တော့ အီတီဟတ်ကွင်းထဲမှာ သူတို့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်”
”ကြက်ဥခေါက်ကြော်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော် ရေခဲသေတ္တာ ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာတော့ သူတို့နဲ့ စကားပြောဖြစ်မှာပါ၊ ဒီအခြေအနေမှာ တခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူး၊ တစ်စုံတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမရာသီတုန်းကလိုပဲ တူညီစွာထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ”လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
နည်းပြဂွါဒီယိုလာရဲ့ စီးတီးအသင်းဟာ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးက လီဗာပူးအသင်းနဲ့ ၈ မှတ်အထိကွာဟနေပေမယ့် စပိန်သားကတော့ ဒါက ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။
ဂွါဒီယိုလာက ”ကျွန်တော် ကစားသမားတွေအတွက်ပဲအာရုံစိုက်ထားပါတယ်၊ ဒါကအရေးကြီးပါတယ်၊ လူတွေကကစားသမားတွေကို ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး၊ ပြောချင်တာကကစားသမားတစ်ဦးကိုသူဒဏ်ရာရနေလားလို့ မေးရပါမယ်၊ အိုကေ နောက်တစ်ယောက်ရော? ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်သလိုအနာဂတ်မှာလည်းဖြေရှင်းရဦးမှာပါ “လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။